अब एक्लिदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ: अध्यक्ष प्रचण्ड – Karnalisandesh
अब एक्लिदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ: अध्यक्ष प्रचण्ड
प्रकाशित मितिः २८ भाद्र २०७८, सोमबार १२:११ September 13, 2021
काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू अब एक्लिदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘कहिलेकाँही मलाई पनि यस्तै हुँदो रहेछ। १/२ वर्ष जतिमा एक्लो पो हुने हो कि ? माओले भनेजस्तै ‘म एक्लो हुँ,’ भन्नुपर्ने हो कि ? कहिलेकाँही यस्तो चित्र पनि मेरो दिमागमा आउँछ के। तपाईहरु यो पनि चिन्तन,मनन गरिदिनुहोला। नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको कार्यदिशाका सन्दर्भमा यो रोग के हो? पुस्तकका टिप्पणीकारहरुले प्रचण्डको नाम आउँछ कि भनेर किन डराउनु भयो? यो व्यक्तिगत कुरा हो र ? व्यक्तिगत प्रशंसा खोजेको कुरो हो र ?’ उनले भने। अध्यक्ष दाहालले केपी ओलीप्रति संकेत गर्दै पुस्तकमा नहुनुपर्ने मान्छेको सन्दर्भमा धेरै लेखिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे।